Ukudlalwa Kwenfl | June 2022
I-Packers 'Championship-Game Curse Iyaqhubeka. Ngaba iya kubaxabisa uAaron Rodgers?
IGreen Bay iwele i-31-26 kwi-Buccaneers ngeCawa, umdlalo weqela lesine lobuntshatsheli be-NFC kule minyaka isixhenxe idlulileyo. Kwaye izinto zaya zisiba mbi ukusuka apho kwinkomfa yeendaba emva komdlalo kaRodgers.
UJared Goff wayenowona Mdlalo mbi wobomi bakhe kwiNqanaba eliKhulu
Umnxibelelanisi wesibhengezo-wesithathu-wesithathu wayeyishukumisile kakhulu intetho 'yenkqubo ye-QB' eyamsukela kwangoko kwikhondo lomsebenzi wakhe, kodwa loo ngxoxo ingabuya emva kokusebenza kakubi ngalo lonke ixesha ngokuchasene ne Patriots kwi Super Bowl LIII
Yintoni eyenzeka esihogweni kwiiLwandle?
Ixesha eliqale ngokuqaqambileyo liphele ngokuphoxeka njengoko uSeattle wabuyela kwimikhwa yakudala, emibi
Ibhola liyaxoka: Abangcwele balahlekile nje kwiFowuni ephosakeleyo kwiMbali yeNFL
Ukubetha kukaNickell Robey-Coleman kwisamkeli esibanzi saseNew Orleans uTommylee Lewis sasicacile isohlwayo sokuphazamiseka njengoko uza kubona. Kodwa iflegi ayizange ize, kwaye abangcwele baya kubukela iSuper Bowl LIII ekhaya.
Wamkelekile kwiRadio Row, indawo yeSuper Bowl's Cutthroat yoLawulo lweSizwe
Nokuba ziyimveliso yokhula okanye iipilisi zebhonasi, eyona ntengiso inkulu yemveli kwihlabathi ithengisa into evekini ekhokelela kumnyhadala ophambili
Ukubeka amandla onke amaqela kwi-NFL Playoffs
IiChiefs zinendlela ecacileyo eya kwiSuper Bowl, kodwa zilandelwa kufutshane liqela lamaqela anokubeka umlo omninzi. Ngubani oza kuphakamisa iLombardi Trophy ngoFebruwari?
Amabali abalulekileyo kaWade Phillips
Yintoni eyenze uPhillips waba ngomnye wabalinganiswa abaqaqambileyo nabathandekayo beNFL ngaphezulu kweminyaka engama-40? Phambi kokubonakala kwakhe kweSuper Bowl LIII njengoLos Angeles Rams umlungelelanisi okhuselayo, buza abadlali abanjengoEarl Campbell, uBruce Smith, noJJ. I-Watt-bonke banentsingiselo yokuyixela.
Abaphumeleleyo kunye nokulahleka kwe-Super Bowl LV
UTom Brady uqhubeka ephumelela ukubonisa ukuba anganakho, kwaye nangona uPatrick Mahomes elahlekile, wenza ukuqaqanjelwa okubalaseleyo kude kube sekupheleni. Kwaye: ukungcikiva, ukwamkelwa kwendoda enkulu, kunye nokunye.
UMarcus Mariota Walahla nje iTouchdown Pass ukuya ku… Marcus Mariota
Ikota yekota igqibezele ukupasa kuye kweyona nto ingummangaliso- kwaye ipholile- idlala kwimemori yamva nje
Abaphumeleleyo kunye nabaphulukene neNFL yeKhadi-yeVeki yeVeki
Ekugqibeleni amaBrown aphumelele umdlalo wokudlala, uMitchell Trubisky ugoduka nembasa yoMdlali oBalulekileyo, kwaye izigqibo ezingathandabuzekiyo zithatha iligi ngokubetha
Ulibale umdlalo we-AFC yoKhuphiswano. Lixesha lokugqibela likaPatrick Mahomes vs Josh Allen Ukuphosa uKhuphiswano.
Yiyiphi i-NFL encinci kunye ne-quarterbacks ezonwabisayo ezinokuphosa ibhola kude kunomnye umntu emhlabeni? Inye indlela yokufumanisa.
Njani i-Marshawn Lynch's Beast Quake Run yatshintsha i-Seahawks Ngonaphakade
Kwiminyaka elishumi eyadlulayo, i-epic Lynch's run kumdlalo wekhadi lasendle ngokuchasene nabaNgcwele bangcangcazelisa uSeattle. Kodwa ikwaphazanyisile i-Seahawks franchise, kwaye yakhokelela kwishumi leminyaka lempumelelo ekungekho mntu unokuqikelela.
Ayilotyala lakho, abalandeli baseSt. Awufanelanga Oku.
Ukufuduswa kwelungelo lezemidlalo sisenzo esikhohlakeleyo nesinqwenelekayo kubalandeli besixeko esasala ngasemva. ISt.
AbakwaBrown baqhekeza isiqalekiso sabo ngokuGaya ii-Steelers eluthulini
UCleveland uphume wakhokela ngobuninzi ngeCawa ebusuku kwaye akazange ajonge ngasemva. Ngoku iqela liyigqibile impumelelo yalo yomdlalo wexesha lokudlalela kwaye lisendleleni eya kwiChiefs.
Ukusebenza ngegunya Kwenzakalisa iiNkosi kwi-Super Bowl, kodwa Nalo Eli Qela Lazenza Iimpazamo
I-Kansas City yayisekupheleni kokufumana iifowuni ezithandabuzekayo ngeCawa, kodwa ekugqibeleni umxube wezinto ezimbi, izigqibo ezingaqhelekanga, kunye nokudlala okungalunganga kugcina uPatrick Mahomes kunye no-Co baphumelele kwi-Super Bowl win
Abasebenzi be-Ringer's NFL Playoff kunye ne-Super Bowl Predictions
Ngaba iChiefs izakufumana izixhobo ebiziswele kwiiveki zokugqibela zexesha eliqhelekileyo? Ngaba u-Aaron Rodgers angaqhubeka nokudlala kwinqanaba lakhe le-MVP? Okanye ngaba elinye iqela liya kudlala ngomonakalisi? Oko nangaphezulu kuqikelelo lwethu lokudlala lweNFL.
IThe Texans ’Epic Choke Job Yayothusa kodwa Ayothusi
Iqela likaBill O'Brien lenze isithethe ngenxa yokuwa phantsi kwemidlalo kunye nokungabikho kwemiboniso, kodwa ilahleko yangeCawa kwiKansas City inokuba yayililitye lesithsaba
I-Cody Parkey's Double Doinker Caps yeXesha leDoinks elichasa yonke iFiziksi kunye neNkcazo
Umkhabi weChicago wabetha phezulu-kwakhona! -Kulahleko ebuhlungu kwiBhele
Inkwenkwezi yeSuper Bowl LV iya kuba ziiBuccaneers 'Massive Pirate Ship
Ulibale inzuzo yentsimi yasekhaya. I-Bucs edlala ikhaya lokuqala le-Super Bowl kwimbali ye-NFL iphawuleka ngenqanawa yabo enkulu yenqanawa ye-pirate-i-gaudy kunye nexesha elide le-capsule ukuya kwixesha elingazange libekho ngenene.
Umda weLegion of Boom's Rise and Fall-kunye nendlela iiSeahawks eziKhutshelwe ngayo ukuKhuphisana
USeattle wakha intshatsheli ye-Super Bowl kwintetho yokulahla inkunkuma, isekondari yokuzikhusela ye-smashmouth. Abo badlali kudala bemkile, kodwa ama-Seahawks alo nyaka asachukunyisiwe ukuba enze ukubabazeka kwi-postseason.
Eyona nba abadlali yangoku
umpu ophezulu iceman wingman
disney channel indlu movie
indlela yokuphuma kokuphela kwesi-3
odlala ibhiden kwi snl
ujay cutler urhweba ngeebhere
I-seahawks vs jaguars iyalwa